Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Tallaalka Dhiirrigeliyaha J&J COVID Hadda Wuxuu Helay Iftiin Cagaaran
Johnson & Johnson waxay ku dhawaaqeen in Xarunta La-talinta ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ee Maraykanka ee Ku Dhaqanka Tallaalka (ACIP), ay ku talisay tallaalkeeda COVID-19 inuu noqdo mid xoojinaya dhammaan shakhsiyaadka xaqa u leh ee qaata tallaalka COVID-19 ee la oggol yahay.
"Talo soo jeedinta maanta waxay taageertaa isticmaalka tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 si kor loogu qaado shakhsiyaadka u qalma Maraykanka iyada oo aan loo eegin tallaalka ay markii hore helaan," ayuu yiri Paul Stoffels, MD, Guddoomiye kuxigeenka Guddiga Fulinta iyo Madaxa Sayniska ee Johnson & Johnson. "Tallaalka Johnson & Johnson wuxuu bixiyay 94 boqolkiiba kahortagga Mareykanka ee ka dhanka ah COVID-19 markii la siiyay xoojiye raacaya tallaalka Johnson & Johnson ee hal xabbad ah, iyo qaabkiisa gaarka ah ee ficil, wuxuu bixiyaa ilaalin waarta. Waxaan ku kalsoonahay faa'iidada ay siin doonto malaayiinta adduunka ah."
Tallaalka COVID-19 ee Johnson & Johnson ayaa lagula taliyay inuu noqdo xoojiye loogu talagalay dadka waaweyn ee da'doodu tahay 18 iyo wixii ka weyn ee qaatay tallaalka hal tallaal ee Johnson & Johnson ugu yaraan laba bilood ka hor. Qiyaas xoojin ah oo ah tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 ayaa sidoo kale lagula taliyay dadka waaweyn ee u qalma ugu yaraan lix bilood kadib qiyaasta labaad ee tallaalka mRNA ee idman.
Talada ACIP waxa loo gudbiyay Agaasimaha CDC iyo Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Maraykanka (HHS) si ay dib u eegis iyo korsasho.
Tallaalka hal-door ee shirkadda COVID-19 waxa uu helay oggolaanshaha Isticmaalka Degdegga ah ee FDA ee dadka waaweyn ee jira 18 iyo wixii ka weyn Febraayo 27, 2021. Oktoobar 20, 2021, FDA waxay oggolaatay isticmaalka degdegga ah tallaalka xoojinta tallaalka Johnson & Johnson COVID-19 loogu talagalay dadka waaweyn ee da'doodu tahay 18 ama ka weyn ugu yaraan laba bilood ka dib tallaalka aasaasiga ah ee tallaalka hal-door ee Shirkadda.
Tallaalka Janssen COVID-19 waxaa loo oggolaaday isticmaalka iyadoo la raacayo Ogolaanshaha Isticmaalka Degdegga ah (EUA) ee tallaalka firfircoon si looga hortago Cudurka Coronavirus 2019 (COVID-19) ee uu keeno xanuunka daran ee neef-mareenka coronavirus 2 (SARS-CoV-2) si loo bixiyo:
• Hal Janssen COVID-19 Qiyaasta xoojisa tallaalka (0.5 ml) ayaa la siin karaa ugu yaraan 2 bilood ka dib tallaalka aasaasiga ah ee shakhsiyaadka da'doodu tahay 18 iyo ka weyn.
• Hal qiyaas xoojin ah oo ah Tallaalka Janssen COVID-19 (0.5 ml) ayaa loo qaadan karaa sidii qiyaas xoojin ah oo kala duwan ka dib marka la dhammaystiro tallaalka aasaasiga ah ee tallaal kale oo la oggolaaday ama la ansixiyey ee COVID-19. Tirada dadka u qalma iyo inta u dhaxaysa qiyaasta qiyaasta xoojisa heterologous waxay la mid tahay kuwa loo oggolaaday qiyaasta xoojinta tallaalka ee loo isticmaalo tallaalka aasaasiga ah.
MAXAAD KU XUSAN TAHAY BIXIYEHA TALLAALKA KA HOR INTA AAD HESHO TALLAALKA JANSANKA COVID-19?
U sheeg bixiyaha tallaalka dhammaan xaaladahaaga caafimaad, oo ay ku jiraan haddii aad:
• aad leedahay wax xasaasiyad ah
• qandho hayso
• ay leeyihiin cillad dhiig-bax ama ay ku jiraan dhiig khafiif ah
• ay yihiin kuwo difaaca jirkoodu hoos u dhacay ama ay ku jiraan dawo saamaynaysa habka difaaca jidhkaaga
• aad uur leedahay ama qorsheyneyso inaad uur yeelato
• ay naas nuujinayaan
• aad heshay tallaal kale oo COVID-19 ah
• Weligaa suuxdinnay xiriir la leh irbad
YAA AAN HELI JAANSANKA TALLAALKA COVID-19?
• ay ku yeelatay fal-celin xasaasiyad daran kadib qiyaas hore oo tallaalkan ah
• uu dareen-celin xasaasiyad daran ku yeeshay wax kasta oo ka mid ah tallaalkan.
SIDEE LOO BIXIYAA TALLAALKA JANSSEN COVID-19?
• Hal qiyaas xoojin ah oo ah Tallaalka Janssen COVID-19 ayaa la qaadan karaa ugu yaraan laba bilood ka dib tallaalka aasaasiga ah ee Janssen COVID-19.
• Hal qiyaas oo xoojin ah oo ah tallaalka Janssen COVID-19 ayaa la siin karaa shakhsiyaadka u qalma kuwaas oo dhammaystiray tallaalka aasaasiga ah ee tallaalka COVID-19 ee la oggol yahay oo kale oo la oggolaaday. Fadlan kala xidhiidh bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga wixii ku saabsan u-qalmitaanka iyo wakhtiga qiyaasta xoojinta.
WAA MAXAY KHATARTA TALLAALKA JANAANKA COVID-19?
• Falcelinta goobta la isku duro: xanuunka, maqaarka oo guduudan, iyo barar.
• Waxyeellooyinka guud: madax -xanuun, dareemid daal badan, muruq xanuun, lalabbo, qandho.
• qanjidhada qanjidhada oo barara.
• xinjirowga dhiigga.
• Dareen aan caadi ahayn oo maqaarka ah (sida xiirid ama dareen gurguurasho) (paresthesia), hoos u dhaca dareenka ama dareenka, gaar ahaan maqaarka (hypoesthesia).
• Dhagaha oo si joogto ah u garaaca (tinnitus).
• Shuban, matag.
Falcelinta Xasaasiyadda Daran
• Neefsashada oo ku adkaata
• Bararka wajigaaga iyo cunahaaga
• garaaca wadnaha oo degdeg ah
• Finiin xun oo ka soo baxa jidhkaaga oo dhan
• Xabad xanuun,
• Lugaha oo barara,
• calool xanuun joogto ah,
• Madax xanuun daran ama joogto ah ama aragga oo xumaada,
• Nabar fudud ama dhibco dhiig oo maqaarka hoostiisa ah oo ka baxsan goobta duritaanka
• Dareenka dareenka oo daciifa, gaar ahaan lugaha ama gacmaha, kaas oo ka sii daraya kuna faafa qaybaha kale ee jirka.
• Socodka oo kugu adkaada.
• Dhaqdhaqaaqa wajiga oo ku adag, oo ay ku jiraan hadalka, calalinta, ama liqidda.
• Aragga oo laba laab ah ama aan awoodin dhaqaajinta indhaha.
• Ku adkaanta xakamaynta kaadiheysta ama shaqada mindhicirka.
MAXAAN KA SAMEYNAYAA SAAMEYNTA DHEXE AH?
Haddii aad dareento cadaanyo daran, wac 9-1-1, ama aad isbitaalka kuugu dhow.
Wac bixiyaha tallaalka ama bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga haddii aad leedahay wax saameyn ah oo ku dhibaya ama aan tagin.
U sheeg waxyeelooyinka tallaalka FDA/CDC Nidaamka Warbixinta Dhacdada Daran (VAERS). Lambarka bilaashka ah ee VAERS waa 1-800-822-7967 ama khadka internetka uga warbixi vaers.hhs.gov. Fadlan ku dar "Janssen COVID-19 Tallaalka EUA" ee safka kowaad ee sanduuqa #18 ee foomka warbixinta. Intaa waxaa dheer, waxaad uga warbixin kartaa dhibaatooyinka soo raaca Janssen Biotech Inc. 1-800-565-4008.
MA HELI KARAA TALLAALKA JANSSEN COVID-19 ISKU MAR ISKU MAR ILAALINTA KALE?
Macluumaadka weli looma gudbin FDA oo ku saabsan maamulka Tallaalka Janssen COVID-19 isla waqtiga tallaallada kale. Haddii aad ka fekereyso inaad ka hesho Tallaalka Janssen COVID-19 tallaallo kale, kala hadal fursadahaaga bixiyahaaga daryeelka caafimaadka.